काठमाडौँ – सन्दीप लामिछानेले कीर्तिमानि बलिङ गरेपछि मलेसियामा जारी आईसीसी विश्वकप टी–२० एसिया क्षेत्र छनोट ‘बी’ को अन्तिम तथा फाइनल खेलमा सिंगापुरले नेपाललाई ८२ रनको सामान्य लक्ष्य दिएको छ ।
बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले १७.३ ओभरमा अल आउट हुदैँ मात्र ८१ रन बनाउन सक्यो । उस्का लागि सुरेन्द्रन चन्द्रमोहनले बनाएको २५ रन नै सर्वाधिक रन बन्न पुग्यो । बसन्त रेग्मीको १०.२ ओभरमा बोल्ड आउटको शिकार हुनु अघि उनले ३२ बलमा ३ चौकाको सहयोगमा २५ रन जोड्न सकेका हुन । त्यस्तै मनप्रीत सिंह र सिद्धान्तले समान १० रन जोड्न बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याटम्यानले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
सिंगापुरलाई सस्तैमा रोक्न नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने घातक बलिङ गरे । सन्दीपले मात्र ३.३ ओभरमा १६ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । सोमपाल कामी र करण केसीले समान २ विकेट लिदा बसन्त रेग्मी र ललित नारायण राजवंशीे समान १ विकेट लिए । ४ विकेट लिएका सन्दीपले नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् ।
उनले एकै प्रतियोगितामा २४ विकेट लिने पहिलो नेपाली बलर बनेका हुन् । यस अघि विनोद दास र बसन्त रेग्मीको नाममा समान २१ विकेट रहेको थियो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५१४:१५
बिग ब्यासमा सन्दीपको टिम मेलबर्नको पहिलो खेल आज ! टिममा सन्दिप पर्ने सम्भावना कति ?
अहिले नेपाल केन्यासँग भिड्दै , यस्तो छ नेपालको जित्ने सम्भावना (अंक तालिकासहित)
च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को ड्र सार्वजनिक ! बायर्न र लिभरपुल बीच घमासान भिडन्त हुने !
रोनाल्डोले छाडेको ७ नम्बर जर्सी एमबाप्पेलाई दिन रियलको कसरत !